China Silicone Nhare Mhosva fekitori uye vagadziri | SJJ
Silicone foni makesi akanakisa dhizaini ekudzivirira mafoni ako kubva mukukwaya, guruva, kuvhunduka uye zvigunwe. Inogona kushandiswa kwenguva yakareba nekuda kwayo yakasimba uye yakasimba. Masayizi anogara achigadzirwa kuti akwanise mhando dzese dzemhando dzakakurumbira dzenhare, nepo zvimiro uye mavara zvinogona kugadziridzwa wi ...
Silicone foni makesi akanakisa dhizaini ekudzivirira mafoni ako kubva mukukwaya, guruva, kuvhunduka uye zvigunwe. Inogona kushandiswa kwenguva yakareba nekuda kwayo yakasimba uye yakasimba. Masikirwo anogara achigadzirwa kuti akwanise mhando dzese dzemhando dzakakurumbira dzenhare, nepo zvimiro uye mavara zvinogona kugadziridzwa nemarogo akasiyana siyana zvinoenderana nezvaunoda. Izvo zvinopenya uye zvinonakidza kushandisa foni ine mifananidzo kana magadzirirwo aunoida iwo. Iyo yakajeka dhizaini uye marogo zvinoita kuti foni yako ive inonakidza uye inokwezva. Kune emakambani emakambani, iri zano rakakura kushambadza marogo nemifungo yako kuburikidza nemakesi efoni yesilicone mumitengo yakaderera.
Saizi: Saizi yakadzoserwa chikamu inokwana saizi yefoni saizi, iyo yekunze saizi uye maumbirwo ari
Colors: Inogona kufananidza PMS mavara, swirl, chidimbu, kupenya-mu-iro-rima, akakwana mavara ari
Logos: Logos inogona kudhindwa, yakadhirowewa, kuraswa, ingi-yakabatana, Laser yakanyorwa
Zvakasungirirwa: Tevedzera kuraira kwako
Zvadaro: Silicone Keychains
Silicone Foni Yenyaya
Die Kukanda Zinc chiwanikwa Pini
Kisimusi Bvudzi Zvishongedzo